Organic Tsvaga Statistics ye2018: SEO Nhoroondo, Indasitiri, uye Maitiro | Martech Zone
Tsvaga injini optimization iri danho rekukanganisa kuoneka kwepamhepo kwewebhusaiti kana peji rewebhu mune mhedzisiro isina kubhadharwa yeinjini yekutsvaga, inonzi dzinongoitika, organic, kana akawana zvabuda.
Ngatitarisei panguva yekutsvaga injini.
1994 - Yekutanga yekutsvaga injini Altavista yakavhurwa. Ask.com yakatanga kuseta zvinongedzo nekuzivikanwa.
1995 - Msn.com, Yandex.ru, uye Google.com zvakatangwa.
2000 - Baidu, yekuChina injini yekutsvaga yakavhurwa.
2004 - Google yakatanga Google Suggest.
2009 - PaChikumi 1st Bing yakavhurwa uye munguva pfupi ikabatanidzwa neYahoo.
MaInjini Ekutsvaga Anoshanda Sei?
Majini ekutsvaga anoshandisa akaomarara masvomhu algorithms yekufungidzira kuti ndeipi saiti iyo mushandisi yaanoda kuona. Google, Bing, uye Yahoo, makuru ekutsvaga injini, shandisa izvo zvinonzi zvinokambaira kuti uwane mapeji ezvavanowana algorithmic mitsva yekutsvaga.
Kune mawebhusaiti anomisa vanokambaira kuvashanyira, uye iwo mawebhusaiti anozosiiwa kunze kweindekisi. Ruzivo runounganidzwa nevanokambaira runoshandiswa neinjini dzekutsvaga mushure meizvozvo.
Zvinoenderana neshumo yekuona na seotribunal.com mune ecommerce:
39% yehuwandu hwepasi rose traffic yakabva mukutsvaga, kunze kweiyo 35% iri organic uye 4% yakabhadharwa yekutsvaga
Imwe yevatatu kutsvagisa smartphone yakaitwa pamberi pekushanya kwechitoro uye 43% yevatengi vanoita zvekutsvaga paInternet vachiri muchitoro
Iyo 93% yezviitiko zvepamhepo zvinotanga neinjini yekutsvaga, uye 50% yemibvunzo yekutsvaga mazwi mana kana kupfuura
Iyo 70-80% yevashandisi veinjini yekutsvaga vari kufuratira shambadziro dzakabhadharwa uye vari kungo tarisa kune iyo organic mhedzisiro
Chii Chiri Mberi?
Imwe yemabudiro ehunyanzvi hwekugadzira nguva dzese ndeyekutsvaga kwenzwi. Dzimwe nguva inonzi izwi-inogoneswa, inobvumira mushandisi kushandisa izwi kuraira kuti atsvage Internet kana chimwe chinhu. Tisati taunza zvimwe zvinonakidza zvine chekuita nekutsvaga kwezwi, ngatitarisei kwenguva pfupi yekutaura uye tekinoroji uye kuti yakashanduka sei kuburikidza nemakore.
Izvo zvese zvakatanga muna 1961 nekuunzwa kweIBM Shoebox, chinova chekutanga chekuziva mutauro chishandiso chinokwanisa kuziva mazwi gumi nematanhatu uye manhamba. Kubudirira kukuru kwakauya muna16 apo Carnegie Mellon akapedza chirongwa cheHarpy icho chakanzwisisa nezve mazwi chiuru. Mumakore gumi chete, takaona Texas Instruments ichiburitsa komputa yemwana ye Speak & Spell muna 1972.
Dhiragoni Dictate yaive yekutanga kutaura kwekuziva chigadzirwa kune vatengi. Yakaburitswa muna 1990 uye yakatengeswa nemadhora zviuru zvitanhatu. Muna 6,000, IBM ViaVoice yakaunzwa, uye gore rakazotevera Microsoft yakaunza maturusi ekutaura muWindows 1994 yayo. SRI yakaendesa inowirirana izwi rekupindura software mugore rinotevera.
Muna 2001, Microsoft yakaunza Windows neHofisi XP kutaura ichishandisa Speech Application Programming Interfaces, kana SAPI vhezheni 5.0. Makore matanhatu gare gare, Microsoft inoburitsa Inzwi Rekutsvaga Kwekutsvaga Kutsvaga (Bing).
Mumakore achangopfuura, kutsvaga kwezwi kwawana nzvimbo yepakati mumainjini ekutsvaga uye irikushandiswa nevanhu vazhinji uye vazhinji nguva dzese. Zvinotarisirwa kuti panosvika gore ra2020, 50% yeese kutsvagisa pamhepo ichave yekutsvaga mazwi Izwi rinotevera rinosanganisira nzira dzekutsvaga mazwi uye softwares dzakagadzirwa mumakore gumi apfuura.
2011 - Apple inounza Siri yeIOS.
2012 - Google Zvino yakaunzwa.
2013 - Microsoft inosuma Cortana mubatsiri.
2014 - Amazon yakaunza Alexa uye Echo yenhengo dzepamusoro chete.
2016 - Google Mubatsiri akaunzwa sechikamu cheAllo.
2016 - Imba yeGoogle yakavhurwa.
2016 - Chinese mugadziri akatanga Echo mukwikwidzi Ding Dong.
2017 - Samsung yakaunza Bixby.
2017 - Apple yakaunza HomePod.
2017 - Alibaba yakatanga Genie X1 smart speaker.
Kuunzwa kweakaomesesa izwi kutsvaga software kusvika parizvino kwaive muna Chivabvu gore rino apo Google yakaratidza Duplex. Iko kuwedzera kweGoogle Mubatsiri anoibvumira kuti iite hurukuro dzepamoyo nekuteedzera izwi revanhu.
Imwe shanduko yakakosha iko kushandisa kwenzvimbo dzenhare. Kutsvaga kwakawanda ikozvino kwaitwa pane nharembozha uye Google inotora chokwadi ichi zvakanyanya. Zvinoda kuti ese mawebhusaiti kuti ave nharembozha kana zvikasadaro vanobuda mukutsvaga.
Kuti uwane zvimwe nezve SEO, peta pasi uye tarisa inotevera infographic.
Tags: Alibabatenderahandifloarchie query fomukumbirabvunza jeevesBaidubingbixbyCarnegie Melloncortana mubatsiriDhiragoni Kutongaakawanagenie x1google mubatsirigoogle homegoogle izvozviGoogle +homepodibm shoeboxIBM ViaVoicemicrosoft bingmobile searchNharembozha Kutsvagamsnkutsvaga kwepanyamaorganic searchSamsungmhouseo nhambaizvo statsseo maitirovaSiriyaKutaura Kokushandisa Zvirongwa ZvirongwanhambaMaitiroizwi kutsvagaYahooYandex
Bannerflow: Dhizaini, Chiyero, uye Shambadzira Campaigns
5 Zvinhu Kana Uchisarudza Izwi Rako Pamusoro PeTarenda reMaximum Impact